UFrancis Lewis Cardozo
UFrancis Lewis Cardozo: Utitshala, uMfundisi kunye noPolitiki
Xa uFrancis Lewis Cardozo wakhethwa njengobhala wenarha yaseMzantsi Carolina ngowe-1868, waba ngumntu wokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuba akhethwe ukuba abe nepolitiki kwilizwe. Umsebenzi wakhe njengomfundisi, utitshala kunye nompolitiki wamvumela ukuba alwe namalungelo abantu base-Afrika-baseMelika ngexesha loKwakha kwakhona.
Yakha i-Avery Normal Institute, enye yezikolo eziziisekondari zokuqala zama-Afrika-aseMerika.
Ukuqala ukuxhasa ukuhlanganiswa kwesikolo eMzantsi.
Umntu wokuqala wase-Afrika-waseMerika ukubamba iofisi yesebe e-United States.
Malungu aBantu abaLwazi
Umzukulu kaKadio ngu-Eslanda Goode Robeson. URobeson wayengumdlali weqonga, umntu ongu-anthropologist, umbhali kunye nomlindi woluntu. Wayetshatile kuPaul Robeson .
Isihlobo esikude seNkundla ePhakamileyo yaseMelika uBenjard Cardozo.
I-Cardozo yazalwa ngoFebruwari 1, 1836, eCharleston. Unina, uLydia Weston wayengumfazi waseAfrika-waseMerika okhululekileyo. Uyise, uIsake Cardozo, wayengumntu wasePhuthukezi.
Emva kokuya ezikolweni ezenzelwe abantu abamnyama abakhululekileyo, uCardozo wasebenza njengomchweli kunye nomkhandi womkhumbi.
Ngo-1858, iKadiozo yaqala ukuya kwiYunivesithi yaseGlasgow ngaphambi kokuba ibe seminariya e-Edinburgh naseLondon.
I-Cardozo yamiselwa ngumphathiswa wePresbyterian kwaye xa ebuyela eUnited States, waqala ukusebenza njengomfundisi. Ngo- 1864 , iKadiozo yayisebenza njengomfundisi kwiTempile yeTempile yaseConstational Church eNew Haven, Conn.
Ngomnyaka olandelayo, iKadiozo yaqala ukusebenza njengegosa leMamishinari eMelika. Umntakwabo, uTomas, wayesele ekhonza njengongqongqo kwisikolo sombutho kwaye kungekudala uCardozo walandela ezinyathelweni zakhe.
Njengomongameli, iKadiozo iphinde isungula isikolo njenge- Avery Normal Institute .
I-Avery Normal Institute yayizikolo zasesekondari samahhala abantu base-Afrika baseMerika. Injongo ephambili yesikolo kukuqeqesha ootitshala. Namhlanje, i-Avery Normal Institute yinxalenye yeKholeji yaseCharleston.
Ngowe- 1868 , iKadiozo yaba ngumthunywa kwintlanganiso yomgaqo-siseko yaseMzantsi Carolina. Ukukhonza njengosihlalo wekomiti yezemfundo, iKadiozo ibambelele kwizikolo zikarhulumente ezidibeneyo.
Ngaloo nyaka, iKadiozo wakhethwa njengobhala wenarha waza waba ngowokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuba abe nesimo esinjalo. Ngempembelelo yakhe, iCardozo yaba negalelo ekuguquleni iKhomishoni yoMhlaba yaseMzantsi Carolina ngokusasaza umhlaba kwiindawo zaseAfrika ezigqilaziwe zaseMelika.
Ngo-1872, iKoozo yonyulwa njengomgcinimafa karhulumente. Nangona kunjalo, ii-legislators zenze isigqibo sokuthi i-Cardozo ifune ukungabambisani kunye nezopolitiko ezikhohlakeleyo ngo-1874. I-Cardozo yabuyiselwa kwesi sikhundla kabini.
Ukuqeshiswa kunye neentlawulo zobuGwenxa
Xa ama-federal army asuswa kwilizwe laseMerika ngo-1877 kwaye iiDemokhrasi zaphinda ziphinde zilawulwe urhulumente karhulumente, iKadiozo yachithwa ukuba ishiye emsebenzini. Ngaloo nyaka, iKadiozo yatshutshiswa ngenxa yoqhinga. Nangona ubungqina obufunyenweyo abuzange bufikeleleke, iKadiozo yayisetyala. Wasebenzela phantse unyaka entolongweni.
Kwiminyaka emibini kamva, uGurane uWilliam Dunlap Simpson waxolela iKoozo.
Emva kokuxolelwa, iKadiozo yathuthela eWashington DC apho wayephethe isikhundla kwiSebe leNondyebo.
Ngowe-1884, iKadiozo yaba yinqununu yeColored Preparatory High School eWashington DC. Ngaphansi koqeqesho lweCardozo, isikolo samisela ikharityhulam yezekharityhulam kwaye yaba esinye sezikolo ezigqwesileyo kwizikolo zase-Afrika zaseMelika. I-Cardozo ithathe umhlalaphantsi ngo- 1896 .
Ngoxa wayekhonza njengomfundisi weChet Street Street Congregational Church, uCadiozo watshata noCatherine Catherine Rowena Howell. Esi sibini sinabantwana abathandathu.
I-Cardozo yafa ngo-1903 eWashington DC.
Isikolo samabanga aphakamileyo seKadizo kwinqanaba elisenyakatho-ntshona laseWashington DC libizwa ngegama likaCardozo.
UFanny Jackson Coppin: UTitshala oPhayona kunye noMfundisi
UJohn Baxter Taylor: Owokuqala waseMelika-American Gold Medalist
UBill Bill Hickok
UJames Weldon Johnson: Umlobi oPhezulu kunye noLungelo loLuntu
Abanikazi be-Afrika-Amashishini aseMelika kwi-Jim Crow Era
UJohn Mercer Langston: U-Abolitionist, uPolitiki noTitshala
I-Top Top Rope Climing Basics
Imibono kwiHora Lokufa
Yintoni i-Soft Rock Music?
Archaism (Amazwi kunye ne-Syntax)
Ziqhelise ekuHlangeni izivakalisi eziHlangayo
Ukudweba nokukopisha imifanekiso usebenzisa iGrid
Ikhefu lokuzalwa elimnandi
AmaHolesi aMnyama atya njani?
Inqununu Inani leNombolo Inani
Ukwenza ividiyo kwiiklasi ze-ESL
Ndingumtsha kwi-Anime. Ndiqala kuphi?
Ukuchonga i-North American Poplars
Yintoni Isikhokelo Somoya?
Amagama kunye nokusetyenziswa kweeGesi ezili-10
Iziganeko ezingaphandle kwezeMpilo - Iindaba ezinyani